တရားအားထုတ်မနက်လည်စာ Adventist ONLINE - နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဝိညာဉ်ရေးသက်တမ်းတိုး
ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာကလေးသူငယ်များရဲ့ - ငါ
ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာကလေးများ - II ကို
ကလေးသူငယ် Devocional - III ကို
ကြှနျုပျတို့၏ website ဘာဝနာမနက်လည်စာ Adventist ONLINE မှကြိုဆိုပါ၏!
ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြင့်: Thiago Amar de Oliveira - Baixo Guandu / ES - ဧပြီလ 21 2018 / ဆက်သွယ်ရန်ကတည်းက: (027) 99777-2514 - Vivo / (027) 98155-2234 - တိ
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ 12 စက်တင်ဘာလ 2018 အားဖြင့် သေချာစွာစဉ်းစားခြင်း
Inspiration လူငယ် 2019 - ရှင်သန်နေသောသဘာဝတရား
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ 22 သြဂုတ်လ 2018 အားဖြင့် သေချာစွာစဉ်းစားခြင်း
Inspiration လူငယ် 2001 အဆိုပါသင်းအုပ်ဆရာများနှင့်သတင်းစာဆရာပြန်လည်ပရင့်ထုတ်ရန် Francisco က Lemos တစ်သဘာဝတရား၏မိတျဆှေနှင့်သူ၏သင်ခန်းစာများကို၏မဆုပ်မနစ်သုတေသီဖြစ်ပါတယ်။ သူ Bahia, Itabuna တှငျမှေးဖှားခဲ့သညျနှင့်အထူးအာရုံကိုမြှုပ်နှံထားပြီး
စပ်စုသေးငယ်တဲ့ - ကျိန် ဆို. ပူဇော်ကလေးများ 2019
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ 22 သြဂုတ်လ 2018 22 သြဂုတ်လ 2018 အားဖြင့် သေချာစွာစဉ်းစားခြင်း
ကမ္ဘာကြီးကိုဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအဘို့ပြုတော်မူပြီအများအပြားစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်စပ်စုမှုအရာရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အဘယ်ကြောင့်သင့်ရဲ့ဆံပင်ကသင်၏အနည်းငယ်သာမိတျဆှေမြား၏ဆံပင်ကဲ့သို့တူညီသောသည်မဟုတ်လော အဘယ်မှာပြုပါ
အမြိုးသမီးမြားရဲ့အတှေးတောဆငျခွ 2019 - ရွှင်လန်းမှု Ringtones
ငါသည်ဘုရားသခင်၏သင်နှင့်အတူတုန်ခါကိုသိ? သင်စဉ်းစားသူလည်းရွှင်လန်းအသံတွေနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ရကြ၏။ ဤသည်ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာအကြားလှပသောနှောင်ကြိုးကျင်းပကြောင်းပုံပြင်များနှင့်ပြည့်ဝ၏
နေ့စဉ်တရားအားထုတ်ရန် 2019 - ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ခြင်း
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ 22 သြဂုတ်လ 2018 29 သြဂုတ်လ 2018 အားဖြင့် သေချာစွာစဉ်းစားခြင်း
မျှော်လင့်ချက်အိပ်မက်ကနေနိုးထဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသောယုံကြည်ခြင်းနှင့်မိုးနှလုံးမြေဆီ၌စိုက်ပျိုးနေတဲ့အမျိုးအနွယ်၏တစ်ဦးဂတိတျော၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ရှေ့ကိုကြှနျုပျတို့မကျြစိဒီဇိုင်းမျှော်လင့်ပါတယ်
ဘုရားသခငျသညျသငျသညျပြောပြရန်လိုသည်အဘယ်အရာကိုနေ့တိုင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ! သင့်ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာအာမခံပါသည်။ Facebook ကမှတ်ချက်
ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာကလေးများ 2018 - ယေရှုနှင့်အတူကြီးထွားလာ
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ 21 ဧပြီလ 20184မေလ 2018 အားဖြင့် သေချာစွာစဉ်းစားခြင်း
နီးပါးတိုင်းကလေးအကြီးမြတ်ဖြစ်လို၏။ အကယ်စင်စစ်သင်တို့သည်လည်းကြီးထွားချင်တယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ရှုထောင့်တွင်ပေါက်သည့်အခါဒါပေမယ့်ကောင်းလှ၏။ သမ္မာကျမ်းစာကဤသို့ဆို၏
ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာကလေးများ 2018 - အသေးစား Curious
နေမင်း 2018 ခြင်းဖြင့်ဘာဝနာ
2018 - နေ့၏အကောင်းဆုံးအချိန်များအတွက်
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ7ဧပြီလ 20184မေလ 2018 အားဖြင့် သေချာစွာစဉ်းစားခြင်း
တစ်အောင်မြင်သောခရစ်ယာန်အသက်တာမှအဆိုပါလမ်းသည်ဘုရားသခင်နှင့်အတူနေ့စဉ်သဟာယထဲမှာစတင် 2018 အတွက်မိသားစုများ၏ဝိညာဉျကိုခိုင်ခံ့စေလိမ့်မည်ဟုသစ်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာဖြည့်ဆည်း။ အောင်ကူညီဖို့
Inspiration လူငယ် - ကောင်းပြီ 2018 စဉ်းစား
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ 28 ဖေဖော်ဝါရီလ 20184မေလ 2018 အားဖြင့် သေချာစွာစဉ်းစားခြင်း
ကြှနျုပျတို့ပွုအရာအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတှေး၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်နည်းမှန်လမ်းမှန်အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ရှောလမုန်သည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောပညာအရှိဆုံးလူသိတယ်။ ဘုရားသခင်ကပဲ့ထိန်း
အမြိုးသမီးမြားရဲ့အတှေးတောဆငျခွ 2018 - ထာဝရမေတ္တာကို
နေ့စဉ်တရားအားထုတ်ရန် 2018 - တစ်ဦးကနေ့ရက်ကိုမမေ့နိုငျဖှယျ
ရက်အနည်းငယ်, အစဉ်အမြဲတည်ရှိ၏မြစ်၏မျက်ရည်စက်လေးတွေဘဝ mark ။ ဘဝနံရံတစ်ခုဖြစ်လျှင်, လကျထကျသညျမိမိအုတ်လိမ့်မည်။ သမိုင်း၏ Great Wall များတွင်
Web ကိုရေဒီယိုမျှော်လင့် Young က
ကျွန်ုပ်တို့၏ Portal အွန်လိုင်းတွေ့ဆုံမည်
ဥပုသ်ပေါ်တယ် Baixo Guandu
အလွှာ Devocionais 2019
၏Previsão Baixo Guandu / ES ကကမ်းလှမ်း CPTEC / INPE
ဂိဒေါင်၏စာမျက်နှာ 300 Group မှပျော်မွေ့
တိုတောင်းသောရေဒီယိုမျှော်လင့် Young က
က Short Portal ကိုဥပုသ်နေ့ကိုကျောင်း
အားဖြင့်ဖြန့်ဝေ WordPresseဒိုနိုဗန်.